Akụkọ - Nkọwapụta maka iji sooks
Nkọwapụta maka iji sooks
Nchekwa nke plastic sooks
Storagelọ nchekwa ahụ kwesịrị ịdị jụụ, ikuku na akọrọ zuru ezu. Ọnọdụ dị elu dị elu karịa + 45 Celsius C na-enweghị ikuku ọ bụla nwere ike ibute nrụrụ na-adịgide adịgide nke eriri roba. Biko rịba ama na ọbụlagodi na eriri eriri ngwugwu, enwere ike iru ọnọdụ okpomọkụ a na ìhè anyanwụ. A ga-emegharị ogologo nkwụsị ogologo na ngwaahịa kwekọrọ na ọnọdụ okpomọkụ. Ibu ibu nke eriri sooks dị elu n'oge okpomọkụ ma nwee ike nrụrụ. Ọ dị mkpa iji hụ na enweghị mgbatị na sooks na yabụ enweghị nrụgide, nrụgide ma ọ bụ nrụgide ndị ọzọ, ebe ọ bụ na esemokwu na-akwalite nrụrụ na-adịgide adịgide na mgbawa. Maka nchekwa dị n'èzí, a gaghị ekpughere eriri plastic na ìhè anyanwụ. Ihe ngwugwu agaghi emechi eriri eriri. Dabere na ngwaahịa a, a ga-echebe eriri plastik ahụ site na ultraviolet na-adịgide adịgide na radieshon ozone.
Ationgbọ njem nke eriri plastik
N'ihi mmegharị na-aga n'ihu, ibu dị na eriri plastik dị ukwuu karịa nke a na-eme n'oge nchekwa. N'oge ọkọchị, okpomọkụ dị n'èzí dị elu, nchịkọta okpomọkụ na ụgbọala ahụ na ịma jijiji na-aga n'ihu n'oge ịkwọ ụgbọala nwere ike ibute ngwa ngwa na nsị nke eriri. Ya mere, na nnukwu okpomọkụ, ogo nchịkọta n'oge mbufe ga-adị ala karịa elu n'oge nchekwa. N'oge njem, a gaghị atụba eriri plastik ahụ, dọkpụrụ ya n'ala, etie ma ọ bụ zọọ ụkwụ. Nke a nwere ike imebi ihe oyi akwa dị na mpụga, helix ahụ nwere ike gbanwee ma ọ bụ mebie kpamkpam. Anyị anaghị eburu ibu ọrụ. Ya mere, a ghaghị ịkpachara anya iji hụ na njikwa na-ekwesịghị ekwesị anaghị emebi ihe.
Okpomoku omume nke plastic sooks
N'adịghị ka eriri roba, oyi na ọkụ na-enwe mmetụta dị ukwuu na eriri plastik. Plastic sooks na-agbanwe mgbanwe ya na agafeghị oke ma ọ bụ ọnọdụ dị ala ma ọ bụ nnukwu okpomọkụ. Na obere okpomọkụ, ha na-esi ike ruo mgbe ha ga-emebi emebi. Enwere ike ịnweta ala mmiri plastik site na ịgafe na oke okpomọkụ dị nso na agbaze agbaze plastik dị na plastik. N'ihi njirimara ndị a, nrụgide na agụụ nkọwa nke ọkpọkọ plastik bụ naanị metụtara ọnọdụ okpomọkụ nke ọkara na gburugburu nke ihe dị ka + 20 Celsius C. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ ahụ agbagha site na ọkara ma ọ bụ gburugburu ebe obibi, anyị enweghị ike ịkwado nrube isi na egosipụtara. njirimara oru.
Mmetụta nke ìhè anyanwụ na eriri PVC
Ultraviolet radieshon nke anyanwụ na-awakpo hoses PVC ma bibie ha oge. Nke a metụtara oge na ike nke radieshon nke anyanwụ, nke na-adịkarị obere na mgbago ugwu Europe karịa na ndịda Europe. Ya mere, enweghị ike inye ezigbo oge. Site na ịtinye onye na-arụ ọrụ UV pụrụ iche, ọnya nke UV radiesị plastik nwere ike belata, mana anaghị akwụsị kpamkpam. Ndị a na-edozi ahụ na-enyekwa ụzarị ultraviolet na-aga n'ihu. Fọdụ n'ime ụdị eriri anyị ka ejikọtara ya na ndị na-akwụ ụgwọ UV dị ka ọkọlọtọ iji hụ na ọrụ ogologo ndụ na ìhè anyanwụ. Na-arịọ, ụdị ọ bụla nke sooks nwere ike dabara na UV stabilizers n'okpuru ọnọdụ akọwapụtara.
Nrụgide nrụgide na agụụ nke sooks
Pressuredị nrụgide nkịtị bụ ụdị niile, na akwa dị ka onye na-ebu nrụgide. Hodị sooks niile nwere plastik ma ọ bụ nchara nchara bụ eriri agụụ. Enwere ike ịgbanwe hoses niile n'ogologo na dayameta ma nwee ike gbagọrọ agbagọ ọbụna n'ime nrụgide akọwapụtara na ụkpụrụ agụụ. Ọbụna n'okpuru ọnọdụ ụlọ nyocha, ogologo na gburugburu nke sooks ahụ na akwa dị ka nkedo nrụgide bụ ihe nkịtị. Ya mere, ọnọdụ ọrụ niile na-agbasaghị na nkọwapụta nwere mmetụta dị ukwuu na omume nke ngwaahịa ndị a. All hoses na gburugburu ma enweghị polyester akwa mkwado bụ naanị ndị kwesịrị ekwesị n'ihi na dị nnọọ nta nsogbu sooks, ma na-bụ-eji maka agụụ ngwa. Dị ka atụmatụ ahụ si dị, ogologo nke ụdị sooks ndị a nwere ike ịgbanwe mgbe niile n'oge eji ya, ihe ruru 30% nke ogologo, ọbụlagodi n'ime nrụgide akọwapụtara na agụụ. Onye ọrụ ga-atụle ihe niile kwere omume ogologo na perimeta ọdịiche na axial ighikota nke sooks n'oge ojiji. N'okpuru ọnọdụ ọrụ, a gaghị edozi eriri ahụ dị ka mkpụmkpụ dị ka ọkpọkọ ahụ, mana ọ ga-enwe ike ịgagharị kpamkpam n'oge ọ bụla. Na ala, sooks nwere ike na-enịm ke conduit nke zuru ezu. N'ime usoro a, a ga-atụle ọdịiche niile enwere ike na geometry sooks. Anyị na-akwado gị ka ị chọpụta akparamagwa nke sooks ahụ eji tupu nnwale wee wụnye ya. Mgbe a na-eji sookọ gburugburu, elongation na ighikota n'okpuru overpressure ga-eme ka mbelata nke dị n'ime dayameta n'otu oge. Maka sooks na nkedo ígwè, ihe nkedo enweghị ike ịgbaso ọnụ ọgụgụ nke dayameta dị n'ime. N'ihi ya, ihe nkedo ahụ nwere ike ịgafe na mgbidi nke eriri ahụ n'èzí ma bibie sooks ahụ. N'ihi ojiji na-adịgide adịgide na oke nrụgide, anyị na-atụ aro ka ị jiri akwa dị ka ezigbo nrụgide ụgbọelu. Nke a na-egbochi elongation dị ukwuu.
Dabere na DIN EN ISO 1402. - 7.3, nrụgide mgbawa nke ikuku agbakọtara na eriri pneumatic kpebisiri ike n'ihe dịka 20 Celsius C, a na-eji mmiri eme ihe dị ka ọkara.
Jiri sooks njikọ
N'ime ngwa ngwa, ihe nkedo a na-etinye plastik nwere ike ijikọta ya na ọtụtụ ngwa ahịa dị na azụmahịa. Na ntinye, a na-adọta eriri ahụ nke ọma na nkwonkwo ma kaa akara. N'ime ngwa nrụgide, eriri eriri dị mgbagwoju anya karị ma chọọ akara akara na-adịgide adịgide n'ihi nsogbu na ọdịiche dị iche iche. A na-ahaziri ngwa nke ngwaahịa anyị nke 989 maka otu ụdị sooks ma dị mma maka nke a. Mgbe ị na-eji ngwa ọkọlọtọ, biko jụọ maka usoro ịkwado anyị. Jiri akwa akwa PVC mee ihe iji hụ na isi ike nke ihe ahụ dị ala karịa nke roba. N'ihi ya, ihe kwesịrị ekwesị nwere ike ọ gaghị enwe nkọ dị nkọ ọ ga-adọka mgbe ị na-achịkọta akwa dị n'ime. Ọ bụrụ na ejiri eriri katrij ma ọ bụ mwekota sooks mee ka eriri rọba ahụ sie ike, jide n'aka na etinyere nrụgide ahụ na ike kachasị dị ala. Ma ọ bụghị ya, eriri sooks nwere ike ịcha akwa n'elu akwa ahụ site na njikọ ma ọ bụ mkpịsị ọkpọ